WHERE IS MY FRIEND'S HOUSE? : 2011
Posted by rajankathet at 11:18 AM2comments: Links to this post
Posted by rajankathet at 11:50 PM3comments: Links to this post
एक असफल आख्यानको आरम्भ
भूमिका बाँध्न चाहन्छु । उपन्यास सम्बन्धी मैले इच्छाएका कुरा पोख्नु अघि ‘यो’ किन्दाको पृष्ठभूमिलाई चिहाउन मन लाग्यो । २०६६ साल जेठ ७ गतेका दिन एक पुस्तक प्रदर्शनीबाट यो उपन्यास किनेको थिएँ- अर्किड बुक्स सेक्सनबाट नै । ध्रुवचन्द्र गौतम मैले लगभग सुनेको मात्र नाम थियो । पढेको नाम थिएन । बेलामौका पत्रपत्रिकामा त्यो गोलाकार हँसिलो आवरण देख्नु अर्कै कुरा हो ।
फेरी मैले यो उपन्यास नै किन छानेँ त? उपन्यासभन्दा पनि यसलाई पुस्तक भन्दा वेस होला । स्पष्ट पार्न चाहन्छु- ‘यो’ किन्दा मलाई थाहा थिएन यो कुनै उपन्यास हो वा संस्मरण । फेरी मैले राजेश केसीको उत्कृष्ट आवरण तस्विरका लागि पनि ‘यो’ किनेको हैन । न त ‘एक असफल आख्यानको आरम्भ’ नाममा युनिक्नेस नै भेट्टाएर हो । गोप्यताको ढक्कनलाई खोल्नुपर्दा – एकदिन आरोहण गुरुकुलमा मैले यो पुस्तक पढिरहेको अवस्थामा भेटेको थिएँ – सुनिल पोखरेललाई ।
‘एक असफल आख्यानको आरम्भ’ प्रयोगात्मक उपन्यास हो । प्रयोगात्मक यसकारण कि यसले आख्यानात्मकता भन्दा पनि निबन्धात्मकतालाई प्रचुरमात्रामा शिरोपण गरेको छ । संस्मरणात्मकता पनि यत्रतत्र फेला पर्दछ । व्यङ्गात्मकता त यस उपन्यासको भुँडी हुँदै हो । ध्रुवचन्द्र गौतमको प्रयोगात्मकताले आख्यानका मुटुफोक्सो लगायत आन्द्राभुँडीहरू मजाले चेप्टिएका छन् भन्दा अभर नपर्ला ।
एक वाक्यमा समेट्नुपर्दा ‘एक असफल आख्यानको आरम्भ’ आधुनिक नेपाली लेखकहरूमा पाईने मपाईँवादप्रतिको घोचपेच हो । उपन्यास नेपाली लेखकहरूमा देखिएको र देखिन थालेको विकृतिमाथि प्रहार गरिएको झटारो हो । तर, कथाका पात्रहरूलाई किनारमा पन्छाएर उपन्यासको कथाचाहिँ ध्रुवचन्द्र गौतमका समकालीन, उँदाउँदै गरेका र अन्य लेखकहरूका कमजोरी र विकृतिहरू कोट्याउनमा केन्द्रीत छ । उपन्यासमा विषयविमुखताले पनि प्रशस्तै मात्रामा खुट्टा हालेको छ । गौतम प्रशस्तै मात्रामा बरालिएको भान हुन्छ ।
यस उपन्यासको मुटुलाई छाम्दा नेपाली लेखकहरू असल बन्न छोडेर सफलताउन्मुख मात्र हुन थालेको पाईयो । उनीहरूबाट संवेदनशीलता नामको चीजले अस्तित्व हराएको कुरा पनि छर्लङ्गियो । एउटै लेख (कृति) लेखेर लेखक सफलताको शिखरमा झण्डा फहराउने कुण्ठाप्रति मात्र अग्रसर बन्न थाले । पारिजातले भनेझैँ अरुको गल्ती र कमजोरी हेर्न माइक्रोस्कोप प्रयोग गर्ने तर आफ्नो हेर्न टिनको चस्मा भिर्ने प्रवृत्तिले आधुनिक नेपाली लेखक समाज गलेको देखियो । जसकारण इमान्दारीताको नाउमा तैरिन खोज्ने ‘आधार शर्मा (मुख्य पात्र)’ बीचैमा डुब्न विवश छ भने जीवनलाई सफलता र सम्पन्नताको तराजुमा जोख्ने र भोग्ने ‘सुषुम्ना’, पहिले ठाउँ नभेट्टाउन्जेल आधारकी प्रेमिका र पछि अनेकौँ सफल व्यक्तित्वकी प्रेमिका र विलासकी रानी, सफलताको उपल्लो कोटीमा पुग्न सफल हुन्छे । यहाँ असल लेखकहरू भोकभोकै डुल्छन् र कलम गुण्डा, अरू लेखकहरूलाई गाली गर्न र गिराउनमा आफ्नो लेखकीय जीवन समर्पित गरेका, हरू विलासिताका पौडिबाज बन्छन् । एउटा लेखक गिर्दा अर्कोले प्रसन्नताको मुद्रा छर्ने र एउटा सफल हुँदा अर्को ईर्ष्या र ग्लानीले भयभीत र छेदविछेद हुने प्रवृत्तिले नेपाली लेखक समाज ढाकिएको छ । यही दोषोन्मुखताको अगेनामा नेपाली लेखन जगत गल्दैछ र यहाँ प्रशस्तै असफल लेखकहरू जन्मिँदैछन् । यहाँ एक असफल आख्यानको आरम्भ हुँदैछ ।
समग्रमा ‘एक असफल आख्यानको आरम्भ’ मपाईँवादी र अवसरवादी लेखकहरूलाई गरिएको गाली हो । सिङ्गो गाली हो । चाटुकारी समाजमा हुर्किँदै गरेको विपन्न लेखनविरुद्द व्यक्त गरिएको छेड हो । आधुनिक र उत्तरआधुनिक भनेर कहल्लिएका लेखकहरूप्रति ध्रुवचन्द्र गौतमले गरेको व्यङ्ग्य हो ।
२०६७ कार्तिक १९, शुक्रबार
निर्मलीडाँडा- ५, खोटाङ
Posted by rajankathet at 8:05 PM3comments: Links to this post
छिप्पिँदै गरेको धुलाम्मे रातमा
यता बाट हुइकिँदै गइरहेछ एउटा दुईपाङ्ग्रे
जसको गतिलाई धावा बोल्न उताबाट आइरहेछ त्यस्तै अर्को,
ती दुई एकअर्काको सामुन्ने परेपछि
यताको दुईपाङ्ग्रेलाई थाहा हुन्छ
उसतिर बढिरहेको त चारपाङ्ग्रे हो
जसको टाउकाको एउटा लाइट बिग्रिएको छ,
झ्याराम्म सिसा फुटेको,
– काठमाडौँ ।
अक्टोबर २०, २०११
Posted by rajankathet at 3:38 AM No comments: Links to this post
Posted by rajankathet at 3:31 AM 1 comment: Links to this post
[म, दुधकोशीको तिरमा, २००९ (हो क्यारे)]
यहाँ धेरै कुरा फर्स्ट् टाइम हुन्छ ।
न त बत्ति नै बल्छ
कसैले स्वीच नै नदबाए ।
यहि हो जीवन,
सुतेपछि न त सुस्ताएको नै भन्न मिल्छ,
वा जागेपछि क्रियाशील नै !
यस्तै नै त छ जीवन-
कोही हाँसिरहेको हो
वा ऊ रुँदा हाँसेजस्तो देखिने हो !
असफलतालाई एउटा अनुभव भनिदिए पुग्छ-
जसको चक्रमा दर्शन छिरेर
यसलाई मूल्यहीन पनि बताइदिन्छ ।
जीवनलाई केको लागि दौडाइरहेको छु
तर दौडाउनुपर्छ भन्ने सिकेको छु ।
यही हो जीवन,
दौडेर कहाँ पुग्छु भन्ने पत्तो पनि छैन,
कुँजिएर बसे काँ नपुगुँला भन्ने सङ्केत पनि छैन ।
मात्र जिइरहेको छु-
केबल जीवन ।
(मैले काम गर्ने फाँटलाई ‘क्रिएटिभ डिपार्टमेन्ट’ भन्दछन् । यो कोठामा यति गर्मी हुन्छ कि, छिर्नेबित्तिकै निद्रा सुरु हुन्छ । आज खाजा खाएर टेबलमै एक निद्रा सुतेर उठेँ अनि काम गर्न भनेर कम्पुटर खोलेँ । त्यसपछि कामलाई एकातिर थाँती राखेर किबोर्डमा औँला दौडाउँदा माथिका केही हरफ बने । बने तर के बने थाहा भएन ।)
अगस्ट ७, २०११
अल्पविराम, योर ट्रान्जिट पार्टनर
Posted by rajankathet at 12:24 AM2comments: Links to this post
जीर्ण हुँदैछन् देवलहरू
मर्दै जाँदैछ कान्तिपुरी नगरी ।।
जुन ०५, २०११
Posted by rajankathet at 10:58 PM No comments: Links to this post
सिक्स् क्याराक्टर्स् इन सर्च अफ एन अथर
AAKAR POST DOT COM
READ FULL STORY from AAKAR-POST
Posted by rajankathet at 9:08 AM No comments: Links to this post
Labels: Collection, Opinions- Experiences
फेरि हुर्केको चाहिँ म गाउँमा नै हो । त्यहिँको माटोमा गोडा
Posted by rajankathet at 8:32 AM3comments: Links to this post
एउटा निलो आकाश,
जस्को खुल्लापनदेखि पन्छिरहेको छ बादल पनि,
उडिरहेछन् चराहरू घरीघरी त्यहाँ
Posted by rajankathet at 6:51 AM No comments: Links to this post
Posted by rajankathet at 6:59 AM No comments: Links to this post
नेपथ्यमा उडिहिन्ने चरी कति राम्रो ।।
Posted by rajankathet at 6:49 AM No comments: Links to this post
ए! नतान् न मलाई
मलाई त्यो आकाशमा विचरण गराउने कुरा नगर तँ
तँ ठोकिने क्षितिज त मैले देखिसकेको छु ।
तँ वायुमा उडेको कुरा गर्छस्
तर तलाईँ स्वयम थाहा छ तँ
Posted by rajankathet at 9:32 PM No comments: Links to this post
पीठ्यूँमा सुन र चाँदी बिच्छ्याइएको हाती
उसलाई लिन आउँथ्यो ।
ऊ त्यो हातीमा चढेर
सहरको सयर गर्न निक्लिन्थी ।
Posted by rajankathet at 1:51 AM No comments: Links to this post